Florentino Perez Oo Zinedine Zidane Ka Guulaysanaya Iyo Gudoomiyaha Tottenham Ee Daniel Levy Oo Qorshihii Zidane Burburinaya. - Gool24.Net
Florentino Perez Oo Zinedine Zidane Ka Guulaysanaya Iyo Gudoomiyaha Tottenham Ee Daniel Levy Oo Qorshihii Zidane Burburinaya.
Madax waynaha Real Madrid iyo macalinka kooxdiisa ee Zinedine Zidane ayaa ku kala aragti duwanaa saxiixyada Pual Pogba iyo xidiga kooxda Tottenham ee Christian Eriksen waxayna hadda u muuqataa in Perez uu guulaysan doono.
Florentino Perez ayaa Tottenham tan iyo sanadkii 2018 waxa uu ka doonayay saxiixa xidiga khadka dhexe ee Christian Eriksen laakiin wax badan ayaa hadda isbadalay iyada oo gudoomiyaha Spurs ee Daniel Levy uu telefoon u diray Perez.
Zinedine Zidane ayaa muhiimada kowaad ka dhiganayay in uu Pual Pogba xagaagan la soo saxiixdo laakiin Perez oo maanka ku haya lacagta waalida ah ee ay United ku doonayso xidiga reer France iyo waliba xidhiidhka aan fiicnayn ee uu Ed Woodward la leeyahay ayaa keentay in uu Perez door bidayay Christian Eriksen.
Sanadkii 2018 kii gudoomiyaha kooxda Tottenham ee Daniel Levy ayaa Perez iyo maamulkiisa Madrid u sheegay in ay Christian Eriksen ka bixiyaan 150 milyan yuro laakiin markii uu xidiga reer Denmark diiday in uu hesiis cusub saxiixo waxa uu hadda diyaar u yahay in 70 milyan uu Madrid kaga iibiyo.
Wargayska Marca ayaa shaaciyay in Daniel Levy uu telefoon kula soo xidhiidhay Florentino Perez si ay uga wada xaajoodaan heshiiska Christian Eriksen kaas oo ay bilaabeen kulankii ay ku yeesheen Madrid ka hor finalkii Champions league.
Daniel Levy ayaa markii hore la xidhiidhay agaasimaha kooxda Real Madrid ee Jose Angel Sanchez si uu madax waynaha kooxdiisa ee Perez ugu war galiyo in ay la wareegi karaan Christian Eriksen.
In hadda ay maamulka Tottenham diyaar u yihiin in Christian Eriksen uu ku biiri karo kooxda Tottenham waxay dilayasaa rajadii uu Zidane ka qabay in kooxdiisu ay riixdo dadaalkii ay ku doonaysay saxiixa Pual Pogba.
Florentino Perez ayaa hadda helay warkii uu doonayay isaga oo u furan in Christian Eriksen uu ka soo bixiyo ilaa 70 milyan yuro waana lacag aad uga hoosaysa inta ay United dul dhigtay adeega Pual Pogba.
Sidoo kale waxay warbaahinta Spain shaacisay in qoyska Christian Eriksen ay guri ka raadsanayaan caasimada Madrid taas oo hadda xaqiiqo ka dhigi karta in xidiga reer Denmark uu qayb ka noqon doono isbadalka Madrid.
Heshiiska Christian Eriksen ee kooxdiisa Tottenhama ayaa galaya 12 kii bilood ee ugu danbeeyay wuxuuna dhamaadka xili ciyaareedka cusub kooxdiisa ka bixi karaa isaga oo xor ah waana dhibta ugu wayn ee hadda Spurs hortaal kadib markii uu heshiis cusub diiday.
Si kastaba ha ahaatee, haddii Perez uu kaga dhabeeyo dalabka uu ka helay Tottenham ee ah in ay la wareegi karaan Christian Eriksen waxay albaabka ka soo xidhi doontaa Pual Pogba iyo riyadii ay isaga iyo Zidane ku doonayeen in ay kuwada shaqeeyaan.